Vavaka hanesorana ny maso ratsy? San Luis Beltrán sy San Benito
6 Famakiana Min
Ny vavaka mba hanesorana ny maso ratsy Izy io dia mahomby amin'ny fanesorana izany ratsy izany pro pro-panahy izay hita taratra ao amin'ny vatan'ilay olona voakasik'izany.
Nandritra el tontoloAmin'ny kolontsaina isan-karazany misy, ny finoana dia voatazona fa ny fijerena ny fialonana, ny eritreritra ratsy na ny faniriana nateraky ny fialonana dia mety hiteraka aretina ara-batana toy ny aretina, ratra ary aretina mety hiteraka FAHAFATESANA.
Fantatra fa maso ratsy satria inoana fa alefa kokoa noho ny fijery ratsy feno faharatsiana sy faniriana ratsy.
Olana ara-panahy madio mety misy fiafarana mety raha tsy noraisina ny fepetra tsara, maro ireo olona afaka mahita ny mpitsabo ary mety hahita fanatsarana ihany fa ny ratsy dia mbola eo ihany no mitondra fahavoazana.
Faharatsiana ratsy izany izay mihamaina ilay olona, ​​matetika miseho amin'ny hoditra na amin'ny fahakiviana, ny zava-dehibe dia ny mahita azy amin'ny fotoana sy manohitra izany amin'ny fitaovam-piadiana ara-panahy.
1 Ny vavaka mba hanesorana ny maso ratsy
1.1 Vavaka hanasitranana ny maso ratsy
1.2 Vavak'i Masindahy Louis Beltran hanaisotra ny maso ratsy
1.3 Vavaka amin'i Saint Benedict hiaro ny ratsy
1.4 Ny vavaka ho an'ny ankizy ratsy
2 Azoko lazaina ve ny fehezanteny 4?
Ny tanjon'io fehezanteny io dia hamafa tanteraka ny faharatsiana sy ny fahavoazana rehetraIzany no mety ho vokatr'izany teo amin'ny vatan'ilay olona mijaly.
Manentana ny hivavaka amin'ny olona voakasik'izany fa matetika izy ireo dia zaza lehibe fa tsy olon-dehibe tsy tandindonin-doza.
Miankina amin'ny hamafin'ny tranga tsirairay dia aroso ny manisy fehezan-teny maromaro ho toy ny novenario, izany mba hialana amin'ny fongota ratsy dia ny mamela fialana sasatra ao amin'ilay olona nefa afaka sitrana tanteraka amin'ny zavatra rehetra.
Tsy maintsy resahina mazava tsara ity raharaha ity na dia zavatra zavatra mbola tsy inoan'ny olona maro aza fa misy.
Tena misy ny tranga tena an'ny olona izay dia voavonjy amin'ny fahafatesan'ny ho avy nateraky ny faharatsiana io rehefa avy nanao vavaka.
Vavaka hanasitranana ny maso ratsy
Miampita anao amin'ny anaran'ny Ray aho… (Lazao amin'ny anaran'ny olona) ny Zanaka… (Lazao amin'ny anarany indray) ary ny Fanahy Masina… (Lazao amin'ny anarany indray) Amena.
Jesosy! Nahary an’Andriamanitra
Tapaka ny tahotrao aho, tsy nasiako antsy, na vy, na tantanana fefy, satria tsy mety tapahina izany.
Tapaka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Tianao angaha ilay vavaka natao hanasitranana sy hanesorana ny maso ratsy?
Betsaka ny vavaka azo atao amin'ny fanasitranana ny maso ratsy, na izany aza dia misy ireo milaza fa ny sasany dia mahomby kokoa noho ny hafa saingy Miankina amin'ny tranga tsirairay.
Aoka ho tadidintsika fa zavatra ara-panahy mazava tsara izany, noho io antony io dia mila miana-javatra mazava alohan'ny hanaovana ny vavaka ny zavatra ilaina mba hahatongavana ny valiny irina.
Raha ny loharanom-pahagagana mahery vaika, ny vavaka dia manome antsika, amin'ity tranga ity, ny fanasitranana tanteraka fa amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia hita saika eo no ho eo, izany hoe tsy mila miandry ela ianao vao manomboka mahita fiovana lehibe ao amin'ilay olona. .
Vavak'i Masindahy Louis Beltran hanaisotra ny maso ratsy
Andriamanitra noforoniko, izaho dia mitahiry sy mitso-drano anao amin'ny anaran'ny Ray Trinite Masina, + Zanaka + Fanahy Masina + olona telo ary tena votoatin'ny Maria Virjiny Maria, Tompovavintsika, torontoronina tsy misy kilema ny fahotana tany am-boalohany.
Virjiny alohan'ny fiterahana + amin'ny fiterahana + sy aorian'ny fahaterahana + ary ny an'i Saint Gertrude be voninahitra ny vadinao malalanao sy ny fanomezana, Virjiny iraika ambin'ny folo, Lord San José, San Roque ary San Sebastián ary ho an'ny olona masina rehetra sy olon'ny Fitsarana selestialy anao. .
Noho ny fahatongavanao be voninahitra indrindra + Fahafinaretana be voninahitra + Fahatongavana ho velona + Fahatongavam-bavaka tsara indrindra + fiakarana: satria mistery avo sy masina indrindra izay inoako ary amin'ny fahamarinana, dia mangataka aminao Ilay Andriamanitra Avo Indrindra, mametraka ny Reny Masinao ho mpanelanelana, mpisolovava maimaimpoana antsika, tsy amin'ireto mahantra zavaboary amin'ity aretina ity, maso ratsy, fanaintainana, lozam-pifamoivoizana sy tazo ary fanimbana hafa, ratra na aretina.
Ny vavaka ho an'ny San Luis Beltran Ho an'ny maso ratsy dia mahery be izy!
Ilay olo-masina manampy antsika hanafaka ny tenantsika amin'ireo ozona izay zakain'ny herin'ny faharatsiana.
San Luis Beltrán dia manam-pahaizana momba ny lohahevitra fanasitranana, ao amin'ireo izay manana lafiny ara-panahy.
Ny olona sasany dia manome torohevitra miaraka amin'ny zava-maniry fanafody sasany izay manampy amin'ny fizotran'ny fanafahana saingy tsy voatery izany satria ny vavaka irery dia mahagaga ary mahery.
Vavaka amin'i Saint Benedict hiaro ny ratsy
Oh Saint Benedict! Ry malala sy tsaroana hatrany, Izay talohan'ny tafika dia nahalala ny fomba hialany, izay mankasitraka ny olony, ary mpivavaka mahatoky amin'ny Tompontsika.
Miangavy anao aho, amin'ny alàlan'ny làlan-kevitr'Andriamanitra anao, dia mamerina ny ilaiko, haingana araka izay azo atao, mba hampiala ny fitarihan'ny faharatsiana, amin'ny fiainako sy ny havako, enga anie ny herinao, ny hatsaram-panahy sy ny fiantrana, ho an'izay Esory ny fanahiko sy ny faharatsiana.
Amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy Tompontsika, mangataka aminao aho hiaraka amiko amin'ny fotoana rehetra iainako, miangavy anao aho mba hiarovanao ahy amin'ny ratsy sy loza rehetra, amin'ny famosaviana sy ny ratsy, raha manam-tanana izy ireo dia tsy azony hisambotra ahy raha tsy manana tongotra izy ireo enga anie ianao hanaraka ahy, enga anie ny fahavalo rehetra ho resy sy hovonoina, miaraka amin'ny fiarovanao sy an'Andriamanitra.
Ny jiro na ny fangovitana, natahotra aho ary nahavita niray tsikombakomba tamiko, Enga anie ny molotro sy ny lelako, manana fahasoavana arivo fotsiny ho anao, Fiderana sy tsodrano, Fahamendrehana sy fiadanam-po ato am-poko, na fahantrana na fitanjahana, na ny hanoanana na alahelo, Mipetraka ao amiko sy ny fiainako izy ireo, ary na dia mandalo aza izy ireo, dia manana ny hery hiderana ny anaranao masina aho.
Manokan-tena ho anao aho, mahatoky aho ary mino anao, Amena.
Reza Ny vavak'i Masindahy Benedict hampiato ny ratsy amin'ny finoana.
Saint Benedict izay fantatra amin'ny maha-mpanompo izay eken'Andriamanitra ny antony mahatonga azy ho mpanampy antsika amin'ny raharaha ilaintsika ario ny ratsy amin'ny fiainantsika, an-trano, asa, trano y family.
Ny fiangonana katolika manerantany dia manantitrantitra ny fampiasana ny Medaly Saint Benedict hitazonana antsika na tsy ho voan'ny ml izay misy na aiza na aiza.
Angovo ratsy dia hita amin'ny tontolo rehetra izay misy, ka izany no antony tokony iarovana ny fiarovana, ny fanaovana vavaka ao amin'i San Benito isan'andro dia manampy antsika hitoetra ho madio avy amin'ireo angovo ratsy sy ireo ratsy rehetra mety ho tonga amintsika.
Ny vavaka ho an'ny ankizy ratsy
Aminny anaran 'Andriamanitra Ray;
Amin'ny anarana masin'ny fianjerana sy ireo mpiaro any an-danitra izay mipetraka any an-danitra, miambina ny sitrapon'ireo mpivavaka mahatoky.
Dada ry dada! Androany dia mitomany eo anatrehan'ny anaranao aho mba hanampy ity kely ity.
Ny zavatra masina indrindra sy be famindram-po aminao dia afaka manao ny zava-drehetra, Tompo ô, ary fantatro fa haverinao ny fahasalamanao amin'ny toe-piainana, ny fahasambarana sy ny voninahitry ny teo aloha.
Ampio izy, Andriamanitra Tsitoha, satria ianao irery no afaka. Amen.
Ny ankizy dia toa olona marefo marefo indrindra avy amin'ny maso ratsy, mitranga matetika izany satria ny zazakely mifoha, ao am-po feno ny faharatsian'ny olona sasany, ireo maniry fialonana dia maniry hanana izay hafa.
Ny tsikera toa tsy mampidi-doza amin'ny maso miboridana dia mety hiteraka fahavoazana be loatra ka miafara amin'ny fahatsoran'ny zaza tsy azo ihodivirana.
Ny ankasitrahana indrindra manaova vavaka isa-maraina momba ny ankizy mba hiarovana azy ireo ary tazony ho toy izany mandritra ny andro, dia tsy maintsy lasa fomba amam-pianakaviana izany.
Ny medaly sy ny amulety dia azo anaovana fa tsy mahery vaika noho ny vavaka.
Azoko lazaina ve ny fehezanteny 4?
Azonao atao ny milaza ny fehezanteny 4 tsy misy olana.
Ny zava-dehibe dia ny fananana finoana mandritra ny vavaka hanesorana ny maso ratsy. Tsy misy zavatra hafa rehetra intsony.
Mivavaha mandrakariva mba hino fa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Ny vavaka raha hivarotra trano